सहकारी विकास बोर्डको २२ रोपनी जग्गा व्यापारिक घरनालाई ‘लिजमा’ ! – SunkoshiNews
कर्णालीका मुख्यमन्त्रीले पाए विश्वासको मत, एमालेका ४ सांसदले गरे शाहीलाई मतदान
वुटवलमा इन्धन खन्याउँदै गर्दा पेट्रोल पम्पमा आगलागी
पत्रकार महासंघको चुनाव : विपुल नेतृत्वको प्यानलै विजयी
नेपाल पत्रकार महासंघको नयाँ नेतृत्वका मतदान सुरु
प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने कांग्रेसको निर्णय, आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल गर्ने
सहकारी विकास बोर्डको २२ रोपनी जग्गा व्यापारिक घरनालाई ‘लिजमा’ !
सुनकोशी न्युज, २०७६ भाद्र १८
काठमाडौँ । राष्ट्रिय सहकारी विकास वोर्डका नाममा रहेको बहुमुल्य जमिन एक व्यापारिक घरनालाई सुम्पने तयारी भएको छ ।
‘बोर्डको स्वामित्वमा रहेको पुल्चोकको २२ रोपनी जग्गा ३० वर्षका लागि भाडामा दिने अन्तिम तयारी गरिएको हो । तर यसबारे बोर्डका कुनैपनि कर्मचारीलाई थाहा समेत दिइएको छैन,’ बोर्डका एक कर्मचारीले रातोपाटीलाई बताए ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री पद्मा अर्याल र वोर्डका सहअध्यक्ष दक्ष पौडेलको मिलेमतोमा ललितपुरको पुल्चोकस्थित बोर्ड स्वामित्वको उक्त बहुमुल्य जमिन कौडीको मूल्यमा गुपचुप रुपमा भाडामा दिन लागिएकोमा बोर्डका कर्मचारीहरुले नै विरोध गरेका छन् ।
‘सिजी डेभलपर्स प्रालि’ लाई उक्त जग्गा अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा लिजमा दिन चलखेल सुरु भएको चाल पाएका केही कर्मचारीले त्यसको विरोध गरेका हुन् ।
जग्गा भाडामा लिएर सो स्थानमा होटल बनाउने सिजीको तयारी छ । बोर्डको अध्यक्ष मन्त्री हुने व्यवस्था छ । बोर्ड अध्यक्ष समेत रहेकी मन्त्री अर्याल र सहअध्यक्ष पौडेलबीच जग्गा लिजमा दिनेबारेमा पटकपटक छलफल भएर प्रकृया अघि बढेको ती कर्मचारीले आरोप लगाए ।
यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको कार्यकलमा पनि उक्त जग्गा सिजीलाई दिने तयारी भएको थियो ।
सो अनुसार प्रस्ताव तयार गरेर निर्णय नै भएपनि रोकिएको थियो । त्यसबेला पनि बोर्ड सञ्चालक समितिमै विवाद भएपछि सो योजना स्थगित भएको बोर्डका एक सदस्यले जानकारी दिए ।
मन्त्री अर्याल भन्छिन् : छलफल भएको छैन
मन्त्री अर्यालले उक्त जग्गा ‘लिज’ मा दिने प्रकृयाबारे आफुलाई त्यति धेरै थाहा नभएको प्रतिकृया दिइन् । उनले आफ्नो कार्यकालमा त्यसबारे खासै छलफल समेत नभएको भन्दै अघिल्लो सरकारले निर्णय गरेको र सम्झौता समेत भएपनि तोकिएका शर्त पालना नभएको भन्नेमात्रै थाहा पाएको जनाइन् ।
‘तपाईंलाई यो सूचना कसरी आयो ? मलाई थाहा भएन । तर मलाई थाहा भएअनुसार सो जग्गा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाकै पालमा सिजी गु्रपलाई दिने सहमति भएको थियो । तर, तोकिएका शर्तहरु पालना नगरेकाले बोर्ड व्यवस्थापन सहमति अहिले तोड्ने गृहकार्यमा लागेको छ,’ मन्त्री अर्यालले भनिन् ।
तर, मन्त्री अर्यालले बोर्डको जग्गा भाडामा दिनेबारेमा आफ्नो कुनै योजना नभएको दावी समेत गरिन् ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, भदौ १८, २०७६
गाडीको झ्यालबाट फोहोर फाले ५ हजार जरिवाना
डेंगु लागेका कृषि मन्त्री ग्राण्डी आईसीयूमा, हेटौडाका पूर्व सभासद् पहरीलाई पनि डेंगु
औषधी व्यवसायी संघ लुम्बिनी प्रदेश र प्रभु बैंकबीच बैंकिङ्ग साझेदारी सम्झौता
मेलम्ची पानीको औपचारिक उद्घाटन
सर्वोच्च पुगेर प्रचण्डले गरे पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता
अध्यक्ष प्रचण्डले मानन्धरलाई कम्युनिस्ट पार्टीको झण्डा अाेडाई श्रद्धाञ्जली दिए
सहसम्पादक : सरला कार्की
प्रवन्ध सम्पादक : शम्भु पहाडी